झण्डै बार्सिलोना पुगेका थिए रोनाल्डो ! मेस्सी र रोनाल्डो एउटै क्लवमा भइदिएको भए..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
झण्डै बार्सिलोना पुगेका थिए रोनाल्डो ! मेस्सी र रोनाल्डो एउटै क्लवमा भइदिएको भए...
डिसी नेपाल , १६ श्रावण २०७६
काठमाडौं। पछिल्लो एक दशक विश्वका उत्कृष्ट फुटबलरको नाम लिनुपर्यो भने २ जनाको नाम आउँछ – क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी । तर, यी दुईमध्ये को उत्कृष्ट ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । मेस्सीका फ्यानहरु मेस्सीलाई उत्कृष्ट मान्छन् । रोनाल्डोका फ्यानहरु रोनाल्डोलाई उत्कृष्ट मान्छन् । फुटबलका विज्ञहरुसमेत यी दुईमध्ये कुनै एकलाई तोकेर सर्वोत्कृष्ट भन्न सक्दैनन् । अग्रज फुटबलरहरुसमेत यी दुईमा को उत्कृष्ट भन्नेमा अन्योलमा पर्छन् ।
पछिल्लो दशक विश्व फुटबलमा राज गरेका यी दुई सुपरस्टारहरु एउटै क्लवबाट खेलेको भए के हुन्थ्यो होला ? यो प्रश्न धेरै फुटबल फ्यानको दिमागमा आउँछ । एक समय यी दुवैले सुरुवातबाटै एउटै क्लवबाट खेल्ने स्थिति बन्नै लागेको थियो । रोनाल्डोले क्लवको सिनिर टिम डेब्यू २००३ मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट गरेका थिए भने मेस्सीले २००४ मा बार्सिलोनाबाट सिनियर क्ल्वमा डेब्यू गरेका थिए । रोनाल्डो त्यसपछि रियल मड्रिड हुँदै अहिले युभेन्टसमा छन् तर मेस्सी बार्सिलोनामै छन् ।
२००३ मा रोनाल्डोलाई म्यान्चेटर युनाइटेडले किन्नुभन्दा अगाडि झण्डै बार्सिलोनाले किनेको थियो । बार्सिलोनाका तत्कालीन अध्यक्ष जोआन लापोर्टाले केही समयअघि यसको खुलासा गरेका थिए । लापोर्टा त्यही वर्ष क्लवको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । अध्यक्ष बनेसँगै उनले क्ल्वलाई बलियो बनाउन राम्रा खेलाडी खोजिरहेका थिए । यसका लागि रोनाल्डिन्होलाई पिएसजीबाट ल्याइएको थियो । पोर्चुगिज मिडफिल्डर डेकोलाई पनि ल्याउने योजना थियो ।
बार्सिलोनाको आर्थिक स्थितिले डेकोलाई ल्याउन भने सम्भव नदेखिएपछि एजेन्ट जोर्ज मेन्डेसले बार्सिलोनालाई रोनाल्डो अफर गरेका थिए । ‘हामीले रोनाल्डिन्हो, माक्र्वेज र कारेस्मालाई साइन गरिसकेका थियौं’ लापोर्टाले भने ‘हामी पूरै क्लवलाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । रोनाल्डो त्यतिबेला पोर्चुगलको स्पोर्टिङमा थिए र हामी उनका एजेन्टसँग छलफल गरिरहेका थियौं जसले हामीलाई डेको बेच्न चाहेका थिए । हामीले डेकोको लागि आवश्यक रकम खर्च गर्न नसकेपछि उनले आफूसँग राम्रो किशोर फुटबलर भएको बताएका थिए ।’
लापोर्टाले अगाडि भने ‘ती किशोर रोनाल्डो थिए । उनलाई म्यान्चेस्टर युनाइडेडले १९ मिलियन युरोमा अनुबन्ध गर्यो तर हामीलाई १७ मिलियन युरोमा अफर गरिएको थियो ।’ बार्सिलोनाले त्यतिबेला त्यो अफरलाई फलोअप गरेन । अन्ततः युनाइटेडमा ६ वर्ष बिताएपछि उनै रोनाल्डो बार्सिलोनाका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी बन्दै रियल मड्रिडमा आए । ला लिगामा रियल मड्रिड र बार्सिलोना सधैं कट्टर प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा रहेका छन् ।